Raheem Sterling Oo Murugo Kusoo Kordhiyey Dunida, Shaaciyeyna Xubno Ka Tirsan Qoyskiisa Oo U Geeriyooday Fayraska Korona - Gool24.Net
Raheem Sterling Oo Murugo Kusoo Kordhiyey Dunida, Shaaciyeyna Xubno Ka Tirsan Qoyskiisa Oo U Geeriyooday Fayraska Korona
Xiddiga Manchester City afka hore uga ciyaara ee Raheem Steerling ayaa shaaciyey in xubno ka tirsan qoyskiisu ay u geeriyoodeen xanuunka fayraska Korona, isla markaana uu wali u tiiraanyoonayo, xilli kooxaha Premier League iyo maamulku ay doonayaan in dib loo bilaabo horyaalka.
Maamulka Premier League iyo 20ka kooxood ee saamiileyaasha ah ayaa waxay isla qaateen in bisha June dib loo bilaabo xili ciyaareedka, iyadoo dawladda UK ay ogolaanayso in xili ciyaareedku uu ku dhamaystirmo garoomo madhan oo taageereyaal la’aan ah.
Tiro ciyaartooyo ah ayaa la sheegayaa inay kasoo horjeedaan in xili ciyaareedku dib u bilaabmo iyagoo u baqaya caafimaadkooda iyo midka qoysaskooda, waxaana kuwaas ka mid ah Raheem Sterling oo hore dhibbane ugu noqday caabuqa oo xubno qoyskiisa ka tirsan ay u geeriyoodeen.
“Waxaan leeyahay saaxiibbo ay ayeeyinkood geeriyoodeen, anigana xubno qoyskayga ah ayaa sidaas oo kale ugu geeriyooday. Waa inaynu caqli ku shaqayno oo aynu ka taxadarno nafaheeda iyo inta innagu xeeran.” Ayuu yidhi Raheem Sterling oo muujinayay inuu kasoo horjeedo in horyaalka dib loo bilaabo, bannaankana keenaya in xubno qoyskiisa ah ay geeriyoodeen.
Sergio Aguero oo ay isku koox yihiin Raheem Sterling ayaa isaguna soo bandhigay cabsida uu ka qabo in ciyaaruhu dib u bilowdaan, waxaanu si cad u qirtay inuu qoyskiisa u baqayo.
Difaaca Newcastle ee Danny Rose ayaa isaguna kaftan ku tilmaamay qorshaha dib loogu bilaabayo xili ciyaareedka.
Tababare Pep Guardiola ayaa hore dhibbane ugu noqday oo ay hooyadii bishii hore u geeriyootay xanuunkan dunida aafeeyey.
Si kastaba, waddanka UK ayaa uu xanuunku ku dilay in ka badan 32,000 qof, waxaase soo yaraanaya kiisaska cusub iyo tirada dhimashadaba, iyadoo dawladduna ay shaacisay inay debcinayso xayiraadihii ay hore usoo rogtay.